ठूलो स्विच र ब्लुलक Martech Zone
शनिबार, डिसेम्बर 22, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
केही हप्ता पहिले मैले बिग स्विच द्वारा पढ्न सुरु गरें निकोलस कार। यहाँ मृत्यु भएको साइटबाट उद्धरणहरू छन्:
एक सय वर्ष पहिले, कम्पनीहरूले स्टीम इञ्जिन र डायनामाको साथ आफ्नै शक्ति उत्पादन गर्न रोके र नवनिर्मित इलेक्ट्रिक ग्रिडमा प्लग इन भयो। बिजुली युटिलिटीहरू द्वारा बाहिर सस्तो बिजुली पम्पले कसरी कारोबारहरू संचालन गर्छ परिवर्तन गर्दैन। यसले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणहरूको श्रृंखला प्रतिक्रिया सेट गर्‍यो जसले आधुनिक विश्वलाई अस्तित्वमा ल्यायो। आज यस्तै क्रान्ति चलिरहेको छ। इन्टरनेटको ग्लोबल कम्प्युटिंग ग्रिडमा जोडिएको छ, विशाल सूचना प्रसंस्करण प्लान्टले हाम्रो घरहरू र व्यवसायहरूमा डाटा र सफ्टवेयर कोड पम्प गर्न सुरु गरेको छ। यस पटक, यो कम्प्युटि गर्दैछ जुन उपयोगितामा परिणत भइरहेको छ।
शिफ्टले पहिले नै कम्प्युटर ईन्डस्ट्रीको रीमेक गरिरहेको छ, गुगल र सेल्सफोर्स डट कम जस्ता नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूलाई अगाडि ल्याउँदै छ र माइक्रोसफ्ट र डेल जस्ता स्टर्टरलाई धम्की दिन्छ। तर प्रभाव धेरै अगाडि पुग्नेछ। सस्तो, उपयोगिता द्वारा आपूर्ति गरिएको कम्प्युटि्गले अन्तत: सस्तो बिजुलीले समाजलाई ठूलो रूपमा परिवर्तन गर्दछ। हामी पहिले नै प्रारम्भिक प्रभावहरू देख्न सक्छौं? संस्थाबाट व्यक्तिमा मिडियामाथि नियन्त्रण परिवर्तन गर्ने क्रममा, गोपनीयताको महत्त्वमाथि बहस गर्दा, ज्ञानकर्मीहरूको जागिरको निर्यातमा, धनको बढ्दो एकाग्रतामा पनि। जब सूचना उपयोगिताहरू विस्तार हुन्छन्, परिवर्तनहरू मात्र विस्तार हुन्छन्, र तिनीहरूको गति मात्र द्रुत हुन्छ।
बिग स्विच पहिले नै एक वास्तविकता हो। जनवरीमा, संरक्षक हाम्रो उत्पादन पूर्वाधार मा सार्दै छ ब्लुयलक। यो नयाँ संसार हो (विज्ञापनले साइडपट्टीमा भनेको जस्तै)।
यो सफ्टवेयरको सेवा (सास) को रूपमा यो उत्तम प्रशंसा हो। सास कम्पनीहरु को लागी मैले काम गरीरहेको छु सधैं हार्डवेयर मा तराजू सुझाव दिए र मानिसहरु का टीम को समर्थन गर्न। ब्लुयलक हाम्रो लागि सही समाधान हो किनकि हामी हाम्रो पूर्वाधार वा यसको साथ जाने विशाल संसाधनहरूको चिन्ता बिना आफ्नो व्यापार बढाउन सक्छौं। यो चिन्ताजनक आउटसोर्सिंग हो!
सेवाको रूपमा इन्फ्रास्ट्रक्चर (IaaS) एक उदीयमान व्यवसाय मोडेल हो कि तपाइँले IaaS प्रदायकबाट मासिक आधारमा निश्चित लागतको रूपमा आईटी संसाधनहरू खरीद गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। IaaS को साथ, सर्वरहरूको पिइल र SAN खरीद गर्नुको सट्टा, तपाईं xt० प्रोसेसर कोर, दुई टेराबाइट भण्डारण र siy गीगाबाइट मेमोरीको भाँडा लिन सक्नुहुनेछ र यसको लागि मासिक वा त्रैमासिक आधारमा तिर्न सक्नुहुनेछ। यो वातावरण निकोलसले आफ्नो पुस्तकमा कुरा गरिरहेको ठ्याक्कै त्यस्तै हो। हामी ब्यान्डविथ, डिस्क स्पेस र प्रोसेसिंग पावर खरिद गर्दैछौं यदि हामी कुनै अन्य उपयोगिता खरीद गरिरहेका छौं।
धेरै IaaS विक्रेताहरु चलाउँछन् VMWare वा भर्चुअलाइजेसन सक्षम गर्दछ भन्दा एक समान अपरेटिंग प्रणाली। यो अपरेटि system सिस्टम दृष्टिकोण हार्डवेयर र तपाइँको वातावरणको बीचमा शिम राख्ने कुञ्जी हो जसले यसलाई स्केल गर्न, वरिपरि घुम्न, नक्कल गर्न मिल्छ। आदि। यसले IaaS प्रदायकलाई परम्परागत सेवा प्रदायक वा होस्टिंग सेन्टरबाट फरक बनाउँदछ।
हामी जनवरीको अन्त्य सम्ममा बिग स्विच गर्दैछौं। पुस्तकको एक प्रतिलिपि लिनुहोस् र ब्लुलोकलाई कल दिनुहोस्।
पुनश्च: यो प्रायोजित पोष्ट होईन… केहि मैले साझेदारी गर्न चाहेको हो किनकि म यस कदमका बारे धेरै उत्साहित छु!
टैग: उद्देश्यआगोएचआर 1981१XNUMX।किम डटकॉमmegauploadsन्यापस्टरpiracyसमुद्री डाकूपाइरेट बेचोरी
डिसे 23, 2007 मा 12: 14 AM
तर ब्लूलक साइट प्रायोजक देखिन्छ ...
जे भए पनि, किन ब्लूलक उल्लेख र अमेजनको EC2, S3, र सिम्पलडिबी उल्लेख छैन?
डिसे 23, 2007 मा 11: 31 AM
ब्लुलकले पोष्टको लागि भुक्तान गरिरहेको छैन न प्रायोजक स्पट। म कहिलेकाँहि साथीहरु र सहयोगीहरुलाई प्रशंसाजनक प्लेसमेन्ट प्रदान गर्दछु। हुनसक्छ मैले यसलाई "मित्र र प्रायोजक" नाम दिनुपर्दछ।
ब्लुयलक पनि यहाँ इण्डियानामा छ - तपाईं देख्नुहुनेछ कि म इण्डियाना स्टार्टअपहरू र टेक्नोलोजी कम्पनीहरूसँग मद्दत गर्न प्रयास गर्छु।
अमेजनको सेवा सेवाको रूपमा पूर्वाधार होइन, तिनीहरू वेब सेवाहरू हुन्। भिन्नता यो हो कि मेरो वातावरणले 'क्लाउड' (अमेजनको सर्त) बाट तानिरहेको छैन जहाँ मेरो वातावरण सयौं वा हजारौं अन्यसँग साझेदारी गरिएको छ।
ब्लुलोकसँग हामीसँग समर्पित सर्भर, डिस्क स्पेस, प्रोसेसर र ब्यान्डविथ हुनेछ। हामी एक भर्चुअलाइज्ड वातावरणमा छौं - त्यसैले हामी चाहिएको बेला हाम्रो वातावरणको नक्कल गर्न सक्दछौं।
हामीले SLA को ग्यारेन्टी गरेको छ, उद्योग मानक सुरक्षा अनुपालन, फायरवालहरू, घुसपैठ पत्ता लगाउने, कन्सोल पहुँच, २//24 निगरानी र समर्थन, vaults बैकअप, बेमानी शक्ति ... तपाईं यसलाई नाम दिनुहोस्।
आशा छ कि मद्दत! हेर्नुहोस् ब्लुयलक थप जानकारीको लागि।
डिसेम्बर १, २०१ 23 2007:२:12 अपराह्न
तपाईंको चम्किलो समीक्षा पछि, हुनसक्छ ब्लूलक एक भुक्तानी प्रायोजक बन्न सक्दछ… 😉
@ डग्लस: मद्दत इंडियाना
मैले बुझें, म पनि एट्लान्टा, GA मा यही गर्छु (हेर्नुहोस्) http://web.meetup.com/32/)
@ डग्लस: अमेजन एक पूर्वाधार सेवा हैन
यद्यपि स्पष्ट रूपमा ब्लूलकको समान तहमा छैन, तर यो EC2 पूर्वाधार होइन?
डिसे 23, 2007 मा 11: 20 AM
@ माइक अमेजन ईसी २ / एस / / सिम्पलडीबी र ब्लूलोकको प्रस्ताव बीचमा ओभरल्याप छ। तर सामान्यतया बोल्दै तिनीहरू धेरै फरक समाधानहरू हुन्, र विभिन्न दर्शकहरूलाई लक्षित गर्दछन्।
तपाइँ प्राविधिक ज्ञानको सभ्य रकम बिना अमेजन क्लस्टर सेटअप गर्न सक्नुहुन्न, र फरक EC2 उदाहरणहरू प्रबन्ध गर्न केहि वास्तुकलाको आवश्यक पर्दछ। तपाईं अनुप्रयोगमा ह्यान्डल गर्न आवश्यक पर्ने धेरै समस्याहरू पनि चलाउनुहुन्छ, EC2 ईन्स्टान्समा स्थिर IP हरू छैन भन्ने तथ्य जस्तै EC2 उदाहरणमा कुनै स्थानीय भण्डारण छैन, S3 भण्डारण SAN भन्दा धेरै ढिलो छ वा स्थानीय डिस्क, र त्यो सिम्पलडिबीले SQL प्रश्नहरू स्वीकार गर्दैन वा जटिलमा सम्मिलित हुन अनुमति दिँदैन। EC2 र सिम्पलडिबी अझै बेटामा छन् (निजी बीटामा पछि), त्यसैले त्यहाँ कुनै SLAs छैन - वास्तवमा त्यस्तो होइन जुन तपाईं आफ्नो उत्पादन आलोचनात्मक व्यवसाय कब्जा गर्न चाहानुहुन्छ।
ब्लूलोकले मूल रूपमा तपाइँलाई विन्डोज र / वा लिनक्स सर्भरको प्रबन्धनको टाउको दुखाइ बिना र्याकको लागि प्रतिस्थापन दिन्छ, वा तपाइँको अनुप्रयोग पुन: ईन्जिनियरिंग गर्दछ ताकि यो अमेजनमा होस्ट गर्न सकिन्छ। तपाईं पनि फोनमा समर्थन ईन्जिनियरहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ।
त्योले भन्यो, अमेजन शुरू गर्न धेरै कम खर्चिलो छ, र यदि तपाई केवल एक जोडी सर्भरहरू चलाइरहनु भएको छ भने ब्लूलोक लागत प्रभावी नहुन सक्छ। यो तपाइँको रूपमा भुक्तानको रूपमा पनि छ, जबकि ब्लूलोक मूल्य निर्धारण परम्परागत डेटा केन्द्रहरू जस्तै हुन्छ जहाँ तपाइँले सीपीयू / डिस्क / ब्यान्डविथ / इत्यादि को एक निश्चित रकम को लागी भुक्तान गर्ने योजना सेटअप गर्नुहुन्छ वा छैन तपाईले प्रत्येक महिना यो सबै प्रयोग गर्नुहुन्छ।
अस्वीकरणहरू: म केहि व्यक्तिहरू लाई चिन्छु जुन ब्लू लकमा काम गर्छन्। तर म सक्रिय रूपमा उत्पादनमा अमेजन एस using प्रयोग गर्दैछु, ईसी २ का एक ठूलो प्रशंसक हुँ (सही केसहरूमा), र मेरो सिम्पलडिबी निजी बीटा आमन्त्रितको लागि म उत्सुकता साथ कुर्दै छु।
Ade टिप्पणी को लागी धन्यवाद। म डग्लसलाई अमेजनको वेब सेवाहरूको तुलना र ब्लू लकसँग विरोधाभास पोष्ट लेख्न भन्दै छु तर अब आवश्यक छैन जस्तो तपाईले पहिले गरिसक्नु भएको थियो!
PS भारतीयहरू वास्तवमा सँगै टाँसनुहुन्छ, डोन्का? 🙂
हा! हो हामी निश्चित गर्छौं, माइक!
यो त्यस्ता क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जुन सानो छ कि त्यहाँ दुई कम्पनीहरू वा व्यक्ति बीच बिभिन्नताको थोरै डिग्री छन्। हामी यी सम्बन्धहरूलाई प्रगाढ बनाउन र क्षेत्रीय रूपमा व्यवस्थित गर्न कोसिस गर्दैछौं।
एक प्राविधिक कम्पनी सुरु गर्न यो उत्तम क्षेत्र हो किनभने जीवन लागत र ट्याक्स लाभहरू यति राम्रो हुन्छन्। राष्ट्रिय तुलनामा, यो औसतमा २०% कम लागत हो। त्यो शब्द हो जुन हामीले निकाल्नु पर्छ! कडा परिश्रम र महान सेवा प्रति मिडवेस्ट दृष्टिकोण पनि ठूलो फरक छ।
सानो इण्डियाना एक नयाँ सामाजिक नेटवर्क हो जुन यस क्षेत्रमा व्यवसायलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सुरू गरिएको हो।
पुनश्च: मलाई खुशी छ कि Ade मा कदम बढाए। हामी ब्लुलोक जाँदै छौं त्यसैले मलाई सबै भिन्नताहरू जान्नु पर्दैन
@ डग्लास: यो एक प्राविधिक कम्पनी सुरु गर्नको लागि उत्तम क्षेत्र हो किनभने जीवन लागत र कर लाभहरू यति राम्रो हुन्छन्। राष्ट्रिय तुलनामा, यो औसतमा २०% कम लागत हो? त्यो शब्द हामीले निकाल्नु पर्ने हो! कडा परिश्रम र महान सेवा प्रति मिडवेस्ट दृष्टिकोण पनि ठूलो फरक छ।
तर त्यसोभए तपाईं बस्नु पर्छ इन्डियाना Godforbid…। (माफ गर्नुहोस्, प्रतिरोध गर्न सकेन '-)
जे भए पनि, तपाईको अर्को प्रायोजकको रूपमा वाणिज्य च्याम्बरमा कल गर्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ ... 🙂
डिसेम्बर १, २०१ 23 2007:२:1 अपराह्न
एक उपयोगिता दृष्टिकोण को रूप मा कम्प्यूटिंग को लागी धन्यवाद। यसले धेरै अर्थ राख्छ र तुरून्त IaaS लाई परिप्रेक्ष्यमा राख्छ। म ब्लुलोक :) को विशेष उपचारको साथ पनि पोष्टको कदर गर्छु।
राम्रो पोस्ट डग।